Su'aal: Maxaa keeno madax xanuunka?
Author Topic: Su'aal: Maxaa keeno madax xanuunka? (Read 20952 times)
« on: January 26, 2010, 12:22:14 PM »
asckm bacda salaan waxaan rabaa inaan idin su'aalo waxyaabaha dhaliya madax xanuunka,
nb dadbaa waxay dhahaan guur la'aanta ayaa keenta marka iga qanciya ma wax jiraa?
Re: Su'aal: Maxaa keeno madax xanuunka?
« Reply #1 on: February 01, 2010, 09:32:41 PM »
Halkaan ka akhriso noocyada madax-xanuunka iyo waxa keena
F.G: Guur la'aanta iyo madax-xanuunka iskuma xirna.
« Reply #2 on: July 01, 2011, 10:49:19 AM »
asc marka hore waad mahadsantihiin sida wanaagsan eed u qancinaysaan bulshada soomaaliyeed ilaahay ha idinka abaal mariyo intaa kadib waxay tahay qiyaasta ugu fiican ee dhiiga laga rabo inay ahaato maxay tahay? waxaan saa u leeyahay maalinbaan dhakhtar tagay anoo madax xanuun ka cabanaya marka wuxuu igu dhahay dhiigaaga ayaa saaid ah marka waxaa loo baahanyahay inaad qaar iska shubto marka idinkoo mahadsan iga soo jaahil tira arinkaas
« Reply #3 on: July 10, 2011, 08:07:34 PM »
Qiyaasta dhiigga, maxaa ula jeedaa? dhiiggu waa noocyo badanyahay.
Ma cadaadiska dhiigga ayaa sarreeya? ma birta dhiigga ayaa badan? ma baaritaan dhiig kale ayaad ka hadlaysaa?
Views: 37055 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 84876 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 45813 April 06, 2016, 04:35:38 PM
Views: 18866 June 11, 2017, 12:22:58 PM
Views: 20614 March 10, 2012, 02:33:13 PM